Korontana any Armenia: Manakana ny lalamby ny mpanohitra, ny lalana mankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Yerevan
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany an'ny governemanta sy ny sekolim-panjakana » Korontana any Armenia: Manakana ny lalamby ny mpanohitra, ny lalana mankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Yerevan
Nanelingelina ny fifamoivoizana tao an-drenivohitr'i Armenia ny mpanohitra ny governemanta, nanakana ny lalamby sy ny lalana mankeny amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Yerevan, taorian'ny nifidianan'ny parlemanta ny fangatahan'ny praiminisitra Nikol Pashinyan ho an'ny praiminisitra vonjimaika.
Nahavita nanakana ny arabe mampifandray ny afovoan-tanànan'i Yerevan amin'ireo distrika fonenana ireo mpanohitra, nanelingelina ny fitaterana tao an-drenivohitr'i Armenia, sary nalaina avy tamin'ny seho niseho. Ny rafitra metro an'i Yerevan koa dia nalemy satria nipetraka teo amoron-dàlana ireo mpanao fihetsiketsehana, ka nanakana ny fiaran-dalamby.
Mandritra izany fotoana izany, nanakorontana ny fifamoivoizana tamin'ny lalana mankamin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Yerevan ny mpanohitra, 12km miala ny afovoan-tanàna. Vokatr'izany dia tsy maintsy nandeha an-tongotra ny mpandeha sasany mba hahatratra ny sidina, araka ny filazan'ny sampam-baovao Sputnik.
Ny serivisy fitaterana an-dalamby dia notapahina ihany koa nanerana ny firenena nandritra ny fihetsiketsehana, hoy ny mpitondra tenin'ny South Caucasus Railways izay nanamafy tamin'ny Interfax. Ny làlambe sasany, anisan'izany ilay mampifandray ny firenena amin'i Georgia mpifanila vodirindrina aminy, dia voalaza fa nosakanan'ny mpanohitra ihany koa.
Tao Gyumri, tanàna faharoa lehibe indrindra ao Armenia, nihahery vaika ny hetsi-panoherana ka lasa naka ny tranon'ny governemanta. Niditra an-keriny tao amin'ny biraon'ny ben'ny tanàna ireo mpanao fihetsiketsehana, nitaky ny hidirany tao amin'ny hetsiky ny mpanohitra. Levon Barsegyan, iray amin'ireo mpitarika fihetsiketsehana, dia nilaza fa ny mpanohitra dia mifehy ny ankamaroan'ny tranom-panjakana ao an-tanàna, hoy ny tatitry ny TASS.
Nanavao ny fihetsiketsehana taorian'ny tsy nahombiazan'ny mpitarika fihetsiketsehana Armeniana Nikol Pashinyan ny toeran'ny praiminisitra tamin'ny talata, ary niantso fitokonana iray ho an'ny firenena ny alarobia maraina - nanentana ireo mpanohana hanakana ny arabe, ny lalamby ary ny seranam-piaramanidina. Taorian'ny adihevitra nafana tao amin'ny parlemanta, ny kandidà mpanohitra 42 taona dia 45 tamin'ny vato 53 ihany no azony mba hahazoana maro an'isa ao amin'ny efitrano 105 seza.
Ny famoriam-bahoaka mahery vaika dia nanohy nihazona ny renivohitra Armeniana na teo aza ny praiminisitra Serzh Sargsyan, izay filoham-pirenena nandritra ny taona maro nifanesy, nanaiky ny fitakian'ireo mpanao fihetsiketsehana ary niala tamin'ny alatsinainy lasa teo.
Ny praiministra mpisolo toerana, Karen Karapetyan, dia niantso ny hery politika rehetra hanatona ny latabatra ary hamaha ny krizy amin'ny fomba "sivilizasiona", mamporisika azy ireo haneho ny "finiavana, ny finiavana ary ny fahalalahana" ary nanindry mafy fa "ny praiminisitra dia tsy afaka fidin'ny parlemanta mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana. "
Abu Dhabi dia mirakitra fitomboan'ny isa indroa amin'ny vahinin'ny hotely
Manambara ny fifidianana ny talen'ny Direction ny Air Canada